Miyuu Shaqsi Everton & Man United Usoo Wada Ciyaaray Horyaalka La Doonayaa Liverpool? Wayne Rooney Oo Aragti Ragganimo Leh Dhiibtay. - Gool24.Net
Miyuu Shaqsi Everton & Man United Usoo Wada Ciyaaray Horyaalka La Doonayaa Liverpool? Wayne Rooney Oo Aragti Ragganimo Leh Dhiibtay.
Halyeeyga xulka qaranka England iyo kooxda Manchester United haatana doorka ciyaartoynimo iyo tababare ku xigeenimo ku jooga Derby County ee Wayne Rooney ayaa ka hadlay haddii kooxda Liverpool ay u qalanto in horyaalka Premier League la guddoonsiiyo.
Haddiiba uu jiro shaqsi kasoo horjeedi lahaa Liverpool oo caddaw ku ahi dabcan waa Wayne Rooney oo taageere weyn u ah kooxdiisii carruurnimo ee Everton sidoo kalena usoo ciyaaray wakhtigiisii dahabiga ahaa Manchester United iyadoo labada kooxoodba ay cadaw toos ah ku yihiin Reds.
Haatan, Rooney oo nuqul aragti ah ku qoray wargeyska The Times ayaa sheegay in Liverpool ay tahay kooxda u qalanta hanashada horyaalka isla markaana uu qofkasta sawiran karo waxa ay uga dhigan tahay koox horyaal 30 sano sugaysay.
Wazza ayaa ku qoray The Times “Liverpool ayaa ku guuleysan doonta horyaalka haatan, Sida aad qiyaasan kartaan waxaan leeyahay jamaahiir Everton ah oo isoo wacaysa oo leh “Waa in horyaalka la kansalo”.
“Dabcan ka Evertonin ahaan iyo qof usoo ciyaaray Manchester United 13 sano waxa jirta qayb yar oo aniga ah oo ku fikiraysa inay sidaasi (In horyaalka la kansalaa) fiicnaan lahayd”.
“Laakiin maya, Liverpool waxay ahayd mid cajiib ah, Shaqo aad u badan ayay galiyeen, Way u qalmaan koobkan, Ma qiyaasi kartaa inaad sugto 30 sano kaddibna sidan lagaaga qaado (Horyaalka)? Go’aankii saxda ahaa ayaa la sameeyay”.
Horyaalka Premier League ayaa si lamid ah horyaalada kale hakad ugu jira sababta caabuqa Coronavirus waxaana lagu balansan yahay in dib loo bilaabo 30-ka bisha April walow dib loo dhigi karo markale haddii xaaladu kasii xumaato.